दीपाश्री निरौला भन्छिन् ‘ छविराज जी ले के गर्न खोज्नुभएको ?’ - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२० भाद्र २०७४, मंगलवार १३:२९
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलको पहिलो निर्माण रहेको सिनेमा मंगलम असोज ११ मा रिलिज हुने पक्का भएको छ । लामो समय देखि चुपचाप बसेको मंगलम टिमले भदौ २० देखि प्रमोशन शुरु गर्दै सिनेमाको प्रदर्शन मिति पनि तय गरेको हो । तर अभिनेत्री तथा निर्मात्री शिल्पा पोखरेलले भने आफूहरुले होलीको समय देखि नै सिनेमाको रिलिज मिति असोज ११ लाई तोकेको बताईन् । यहि मितिमा दीपाश्री निरौलाको निर्देशन रहेको सिनेमा ‘छक्का पञ्जा २’ पनि रिलिज हुँदैछ ।
यस्तो अवस्थामा एउटा चलेको ब्यानरसँग फिल्म किन जुधाउनु भयो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा शिल्पाले भनिन्, ‘छक्का पञ्जा २ भन्दा पहिले नै हामीले सिनेमाको रिलिज मिति तय गरेका थियौँ । होलीको समयमा हाम्रो सिनेमाको रिलिज मिति पक्का भएको थियो । त्यस बखत दीपक दाई र दीपा दिदीले हामीलाई बधाई पनि दिनु भएको थियो । तर पछि ‘छक्का पञ्जा २’ पनि यहि मितीमा भन्दा हामी नै चकित पर्यौँ ।’
एउटा नाम चलेको र सफल ब्यानरको सिनेमा एउटै मितिमा रिलिज गर्नु र दुवैलाई सफल बनाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम भएको शिल्पाले बताईन् । तर आफ्नो सिनेमाको कथा बलियो भएको र आफूहरुले सकेसम्म राम्रो गरेका कारण खासै डर भने नलागेको उनको तर्क छ ।
उता दीपाश्री निरौलाले भने यस विषयमा कुरा गर्दै भनिन्, ‘छवि जीले पहिलो हामीसँग सिनेमा नजुधाउने भनेर हाईलाईट्ससँग पैसा लिईसक्नु भएको थियो । वितरकहरुसँग पनि सिनेमा नजुधाउने सम्झौता भएको थियो । अहिले सबै हलको हामीसँग सम्पर्क छ ।
‘मंगलम’को लागि हलहरु पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सिनेमा जुधाएर उहाँले के गर्न खोज्नु भएको हो ? उहाँले कसलाई घुर्काउनु भएको हो ? हामी त अचम्म परेका छौँ । उहाँले हामीसँग बार्गेनिङ गर्न खोज्नु भएको होकी ! जस्तो लाग्यो ।’
निर्माता छविराज ओझाले पनि एक अनलाईनसँग कुराकानी गर्दै आफूले पहिले देखि नै ‘मंगलम’ असोज ११ मा रिलिज गर्ने भनेर बसेको भन्दै आफू यसैमा अडिग भएको बताएका छन् । त्यस्तै वितरक गोपाल काजी कायस्थले पनि सिनेमा असोज ११ मै रिलिज हुने पक्का भएको बताएका छन् । बिहिबार सम्म ‘मंगलम’को पोस्टर र गीत सार्वजनिक हुने भएको छ ।
‘छक्का पञ्जा २’ ले भने सिनेमाका दुईवटै गीत र पोस्टर रिलिज गरिसकेको छ । बुधबार सिनेमाको ट्रेलर रिलिज हुने तयारी छ । नेपाली सिनेमा नजुध्ने भन्ने त हैन एकै पटक ४ वटा सिनेमा सम्म प्रदर्शनमा आएका उदाहरण छन । तर चल्तीका ब्यानरमा बनेका सिनेमा सकभर नजुधाउदाँ दुबै निर्मातालाई फाइदा र दर्शकलाई पनि सुबिधा हुने तर्फ सिनेमा निर्माताहरुले सोंच्न जरुरी छ । राम्रा नेपाली सिनेमा एकै मितिमा रिलिज गर्दा दर्शक बाढीने र घाटा दुवैलाई हुने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।
छविराजदीपाश्री निरौलाशिल्पा पोखरेल
ब्वाईफ्रेन्डको लागी ढोका खुल्ला छ : गायिका एन्जिला रेग्मी
ईन्दिराको बेहुलीको अन्तराष्ट्रिय बजारमा चर्चा